Empress Matilda (Maud): အင်္ဂလန်၏အခွင့်အရေးများအနန္တတန်ခိုးရှင်?
အင်္ဂလန်ရဲ့အနန္တတန်ခိုးရှင် Be မလားဘယ်သူအမျိုးသမီး
Rouen, ပြင်သစ်မှာ Matilda ရဲ့သင်္ချိုင်းပေါ်တွင်ကမ္ပည်းဖတ်: "; မိခင်အတွက်မွေးခြင်းဖြင့်အကြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့် သာ. ကြီးပေမယ့်အကြီးမြတ်ဆုံးဒီနေရာမှာဟင်နရီရဲ့သမီး, ဇနီးနှင့်မိခင်တည်ရှိသည်။ " အဆိုပါသင်္ချိုင်းကမ္ပည်းသို့သော်တပြင်လုံးကိုပုံပြင်ပြောပြမထားဘူး။ အဆိုပါ Empress Matilda (သို့မဟုတ် Empress Maud) အကောင်းဆုံး၏ရာဇပလ္လင်အနိုင်ရ, သူမ၏ဝမ်းကွဲ, စတီဖင်ဆန့်ကျင်သူမ၏ရန်ပွဲအားဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့သည်ပြည်တွင်းစစ်အဘို့သမိုင်းတွင်ထင်ရှားဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂလန် သူ့ကိုယ်သူနှင့်သူမ၏သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့။
သူမသည်အကြားခဲ့ -Norman အင်္ဂလန်မှာအာဏာရလူတန်းစား။
ရက်စွဲများ: သြဂုတ်လ 5, 1102 - စက်တင်ဘာလ 10, 1167
Matilda (Maud) အသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည် ဘုရင်မကြီး အင်္ဂလန်၏ (အငြင်းပွား), အင်္ဂလိပ်၏သမ္မတကတော်, Empress (သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ရောမအင်ပါယာ, ဂျာမနီ), imperatrix, ရောမဘုရင်မ, Romanorum Regina, Anjou ၏ Countess, Matilda သြဂတ်စ, Matilda ကောငျး, Regina Anglorum, domina Anglorum, Anglorum domina, Anglia Normanniaeque domina ။
"Mathildis Imperatrix Henrici filia et Anglorum domina regis ။ " အဖြစ် Matilda ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်ကို အသုံးပြု. 1141 အပြီးစာရွက်စာတမ်းများမှသူမ၏နာမကိုအမှီလက်မှတ်ရေးထိုး "Mathildis imperatrix et Regina Anglia" ဖတ်နေအဖြစ်ဖော်ပြတစ်ဦးကတံဆိပျကိုဖကျြဆီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့်သူမဘုရင်မကြီးထက်အင်္ဂလိပ်စာသမ္မတကတော်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထားကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ရှင်သန်ရပ်တည်မထားဘူး။ သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတံဆိပျ (ရောမ၏ဘုရားသခင်ဘုရင်မ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် Matilda) "Mathildis dei gracia Romanorum Regina" ဖတ်ပါ။
Matilda သို့မဟုတ် Maud?
Maud နှင့် Matilda တူညီသောအမည်ပေါ်တွင်မူကွဲပါ၏ Matilda အဆိုပါ Saxon နာမကိုအမှီ Maud ၏လက်တင်ပုံစံဖြစ်ပြီး, များသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့်-Norman မူရင်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
တချို့ကစာရေးဆရာများအဆိုပါ Empress Matilda ဘို့မိမိတို့တသမတ်တည်းသတ်မှတ်ရေးအဖြစ် Empress Maud ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤသည်သူမ၏ပတ်လည်ရှိများစွာသောအခြား Matildas မှဤ Matilda ခွဲခြားရန်အသုံးဝင်သောကိရိယာ:
ဟင်နရီငါသည်လည်း Maud သို့မဟုတ် Matilda အမည်ရှိအနည်းဆုံးတရားမဝင်သမီးရှိခဲ့ပါတယ်။
ရောဘတ်, Gloucestor ၏ Earl တစ် Matilda လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်၏ဦးရစ်သရဖူများအတွက် Empress Matilda ၏ပြိုင်ဘက်သည်အဘယ်သူ၏မယား, ကိုလည်း Empress တစ်ဝမ်းကွဲသူမ၏ဝမ်းကွဲစတီဖင်, ကိုလည်း Maud သို့မဟုတ် Matilda အမည်ရှိခဲ့သည်။ စတီဖင်ရဲ့မိခင်နော်မန်၏ Adela ဟင်နရီဗြဲ၏နှမခဲ့သည်
အဆိုပါ Empress Matilda ရဲ့မိခင်ခဲ့ပါတယ် စကော့တလန် Matilda ။
Empress Matilda အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Matilda ဟင်နရီငါ ( "ဟင်နရီ Longshanks" သို့မဟုတ် "ဟင်နရီ Beauclerc"), နော်မန်နှင့်အင်္ဂလန်ဘုရင်၏ Duke ၏သမီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဟင်နရီ V ကို, သန့်ရှင်းသောဘုရားရောမဧကရာဇ် (နှင့်အရှင် "Empress Maude") ၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ဒုတိယခင်ပွန်း Anjou ၏ဂျက်ဖရီကသူမရဲ့သားကြီးဟင်နရီ II ကို, နော်မန်၏ Duke နဲ့အင်္ဂလန်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဟင်နရီ II ကိုသူမ၏ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားထံမှသူမ၏နှင့်အတူသယ်ဆောင်သူ့မိခင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ဟင်နရီ Fitzempress (Empress ၏သား) အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။
သူမ၏ဖခင်မှတဆင့်, Matilda သူမ၏အဖိုးဝီလျံငါနော်မန်၏ Duke နဲ့အဖြစ်လူသိများအင်္ဂလန်ဘုရင်အပါအဝင်အင်္ဂလန်၏-Norman အောင်နိုင်မှဆင်းခဲ့သည် ဝီလျံဟာအောင်နိုင်သူ ။ သူမ၏မိခင်ရဲ့မိခင်မှတဆင့်သူမအင်္ဂလန်ပိုမိုရှငျဘုရငျတို့ထံမှဆင်းသက်တော်မူခဲ့သည်: ဦး Edmund II ကို "Ironside" Ethelred II ကို "ဟုအဆိုပါမဖြစ်သေးတာ," Edgar "ဟုသင့်မြတ်စွာ," ဦး Edmund ငါ "အံ့ဖှယျ," အက်ဒွပ်ငါက "အသက်ကြီး" နှင့်အဲဖရက် "ဟု ဂရိတ်။ "
ဖြူသင်္ဘော 1120 ခုနှစ်တိမ်းမှောက်သည့်အခါသူမ၏ညီငယ်, ဝီလျံ, မိမိအဘ၏သာကျန်ရစ်သူတရားဝင်သားအဖြစ်အင်္ဂလန်၏ရာဇပလ္လင်မှအမွေခံသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်, ဟင်နရီငါသူ၏အမွေဆက်ခံသူအမည်ရှိနှင့်ဘုံ၏မှူးမတ်တို့ကအရေးဆိုမှု၏ထောက်ခံချက်ရယူ ။
မိမိအအစ်ကိုဝီလျံရုဖုတစ်ဦးထင်အမဲလိုက်မတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့နှင့်ဟင်နရီလျင်မြန်စွာ, ထိုအမည်ဖြင့်မှည့အမွေဆက်ခံသူများထံမှခေါင်းစဉ်အဘို့အအခြေချသူကိုအခြားအစ်ကိုရောဘတ်, ထိန်းချုပ်မှုသိမ်းဆည်းရမိသည့်အခါဟင်နရီငါကိုယ်တော်တိုင်အင်္ဂလန်၏ရာဇပလ္လင်အနိုင်ရခဲ့ကြောင်း နော်မန်၏ Duke ။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီ၏တူ, စတီဖင်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအလျင်အမြန်ဟင်နရီရဲ့သေသောနောက်အင်္ဂလန်၏ဘုရင်အဖြစ်ကိုထိန်းချုပ်တာအတွက်တကယ်ကိုခန့်မှန်းရခက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါဟာသူတို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးတတျနိုငျသသို့မဟုတ်အင်္ဂလန်၏အုပ်စိုးသောမင်း၏ရုံးခန်းကိုင်သင့်တယ်မယုံသောကြောင့်, Matilda ကိုထောကျပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၏ချိုးဖောက်မှုအတွက်စတီဖင်ထောက်ခံသောဤသူမှူးမတ်များတို့သည်လည်းဒါပြုဖွယ်ရှိသည်။ တစ်ဦးကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်မိမိလက်ျာဘက်ထိုအချိန်ကအင်္ဂလန်မှာကောင်းမွန်စွာထူထောင်မခံခဲ့ရအုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်းအယူအဆ - - ဤမှူးမတ်ဖြစ်ကောင်းလည်း Matilda ၏ခင်ပွန်းစစ်မှန်တဲ့အုပ်စိုးသောမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနှင့် Anjou ၏ဂျက်ဖရီ, ဘယ်သူကိုမှဟင်နရီသည်သူ၏သမီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည် , အင်္ဂလိပ် nobility သူတို့၏မင်းအဖြစ်လိုချင်မ Baron သူ၏အဓိကအကျိုးစီးပွားပြင်သစ်၌ရှိမင်းချင်ခဲ့ဘူးဘယ်သူကိုတစ်ဇာတ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Matilda ရဲ့တရားမဝင်ဝက်အစ်ကို (ဟင်နရီငါ၏ 20 ကျော်တရားမဝင်သားသမီးများ၏တဦးတည်း) အပါအဝင်အနည်းငယ်မှူးမတ်, Gloucestor ၏ရောဘတ်, Matilda ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံလျက်, ရှည်လျားသောပြည်တွင်းစစ်အများစုအဘို့, Matilda ရဲ့ထောက်ခံသူတွေကအင်္ဂလန်၏အနောက်ဘက်ကျင်းပခဲ့တယ်။
အဆိုပါ Empress Matilda အဖြစ်အခြား Matilda , စတီဖင်၏မယား, ပါဝါ, ကိုယ်လက်ပြောင်းလဲသွားတယ်စီပါတီအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်အခြားအနိုင်ယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပုံရသည်အဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ရာဇပလ္လင်ကျော်ရန်ပွဲများတွင်တက်ကြွစွာခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Empress Matilda များအတွက် Timeline ကို
1101 - သူ့အစ်ကိုဝီလျံရုဖုလျင်မြန်စွာသည်သူ၏သည်အခြားအစ်ကိုရောဘတ်ရွှေ့ပြောင်းဖို့ထိန်းချုပ်မှုရယူသေဆုံးသောအခါဟင်နရီငါအင်္ဂလန်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည် "Curthose ။ "
သြဂုတ်လ 5, 1102 - စကော့တလန်ဘုရင် Malcolm III ကို၏သမီးသူ (လည်း Edith ခေါ်) ဟင်နရီငါနော်မန်နှင့်အင်္ဂလန်ဘုရင်၏ Duke, သူ၏ဇနီး, Matilda မှမွေးဖွား Matilda, ဒါမှမဟုတ် Maude ။
သူမသည် Sutton Courtenay (Berkshire) တွင်တော်ဝင်နန်းတော်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။
1103 - ဝီလျံ, Matilda ၏အစ်ကို, မွေးဖွား။
ဧပြီလ 10, 1110 - မှအကြင် ညျသနျ့ရှငျးသောရောမဧကရာဇ် , ဟင်နရီ V ကို (1081-1125)
ဇူလိုင်လ 25, 1110 - Mainz မှာဂျာမန်၏သရဖူဆောင်းဘုရင်မ
ဇန်နဝါရီလ6သို့မဟုတ် 7, 1114 - ဟင်နရီ V ကိုလက်ထပ်
1117 - Matilda သူမနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းဂိုဏ်းချုပ် Bourdin (မေလ 13) ကဦးဆောင်သည့်အခမ်းအနားများတွင်သရဖူဆောင်းခဲ့ကြရှိရာရောမမြို့သို့ရောက်ရှိသည်။ သူမဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်နားလည်မှုလွဲအားပေးခဲ့သော်လည်းပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့သောဤရာဇဘိသိတ်, သူမကစာရွက်စာတမ်းများသူမ၏အသက်ရှည်သမျှများတွင်အသုံးပြုရသော Empress ၏ Matilda ရဲ့ယဉျကြေးခေါင်းစဉ်ကို ( "imperatrix") များအတွက်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။
1118 - Matilda ၏မိခင်ကွယ်လွန်သွား
1120 - ဖြူသင်္ဘောပျက်စီးသောအခါအင်္ဂလန်မှပြင်သစ်ကနေဖြတ်ကူးနေချိန်တွင်ဝီလျံဟင်နရီငါရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတရားဝင်အထီးအမွေဆက်ခံသူ, သေခံတော်မူ၏။
ဟင်နရီအနည်းဆုံး 20 တရားမဝင်ကလေးများဖခင်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတရားဝင်အမွေဆက်ခံသူအဖြစ်ဝီလျံ၏အသေခံခြင်းမှာ, သာ Matilda နှင့်အတူရုံတစျခုအထီးတရားဝင်အမွေဆက်ခံသူနှင့်အတူထွက်ခွာခဲ့သည်
1121 - ဟင်နရီငါပုံနေဆဲဖခင်တစ်ဦးအထီးအမွေဆက်ခံသူမျှော်လင့်, Louvain ၏ Adela မှတစ်စက္ကန့်အချိန်လက်ထပ်
1125 - ဟင်နရီ V ကိုအသေခံခြင်းနှင့် Matilda, သားမရှိဘဲ, အင်္ဂလန်မှပြန်လာသော
ဇန်နဝါရီ 1127 - အင်္ဂလန်၏ဟင်နရီငါ Matilda သည်သူ၏အမွေဆက်ခံသူအမည်နှင့်အင်္ဂလန်၏ Baron ပလ္လင်တော်မှအမွေခံအဖြစ် Matilda လက်ခံခဲ့သည်
ဧပြီလ 1127 - ငါ Matilda, အသက် 25, ဂျက်ဖရီ V ကို, Anjou ၏အရေအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစေသည်စီစဉ်ပေးဟင်နရီ, အသက် 15
May 22, 1128 - Anjou ၏အနာဂတ်အရေအတွက် - အ Empress Matilda Le Mans ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, Anjou (နေ့စွဲကိုလည်းဇွန်လ 8, 1139 အဖြစ်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်) မှာဂျက်ဖရီ V ကိုကို Fair, Anjou, Touraine နှင့်မိန်းမှခေံ, လက်ထပ်
မတ်လ 25, 1133 - ဟင်နရီ၏မွေးဖွား, Matilda နှင့်ဂျက်ဖရီ၏အကြီးဆုံးသား (ပထမလေးနှစ်တှငျမှေးဖှားသားသုံးယောက်၏)
ဇွန်လ 1, 1134 - ဂျက်ဖရီ, Matilda နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း၏သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်။ ဒီအသားအကြာတွင် Anjou ၏ဂျက်ဖရီ VI ကို, Nantes နှင့် Anjou ၏အရေအတွက်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 1, 1135 - ဘုရင်ဟင်နရီငါဖြစ်ကောင်းပျက်စီးကြောင်းအစာစားခြင်းကနေအသေခံ ငါးရှဥ် ။ Matilda, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် Anjou အတွက်ခရီးသွားလာနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနှင့်ဟင်နရီငါ၏တူ Blois ၏စတီဖင်ရာဇပလ္လင်ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ စတီဖင်သူမ၏ဖခင်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှာ Matilda ဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သော Baron များစွာ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဒီဇင်ဘာ 22 ရက်နေ့တွင် Westminster Abbey မှာမိမိကိုမိမိသရဖူဆောင်းခဲ့
1136 - ဝီလျံ၏မွေးဖွား, Anjou ၏ဂျက်ဖရီနှင့် Empress Matilda ၏တတိယသား။ ဝီလျံ Poitou ၏နောက်ပိုင်းတွင်အရေအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1136 - အချို့သောမှူးမတ် Matilda ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံနှင့်တိုက်ပွဲများအနည်းငယ်နေရာထွက်ဖဲ့
1138 - ရောဘတ်, Gloucester ၏ Earl, Matilda တစ်ဝက်ညီအစ်ကိုချင်း, Full-စုံတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တစ်စင်းအားပလ္လင်တော်ထဲကစတီဖင်ထိုင်ခုံနေရာဖြုတ်ပစ်နှင့် Matilda တပ်ဆင်ရန် Matilda နှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
1138 - Matilda ရဲ့မိခင်ဘထွေး, စကော့တလန်သည်ဒါဝိဒ်ကိုငါသူမ၏အရေးဆိုမှု၏ထောက်ခံမှုအတွက်အင်္ဂလန်ကိုကျူးကျော်။ စတီဖင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေက Standard များ၏တိုက်ပွဲမှာဒါဝိဒ်၏တပ်ဖွဲ့များကရှုံးနိမ့်
1139 - Matilda အင်္ဂလန်တွင်ဆိုက်ရောက်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 1141 - Matilda ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလင်ကွန်း၏စစ်တိုက်နေစဉ်အတွင်းစတီဖင်ဖမ်းမိခြင်းနှင့် Bristol က Castle မှာချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူ့ကိုကျင်းပ
မတ်လ 2, 1141 - Matilda, Winchester က Blois ၏ဟင်နရီ၏ဘိရှော့ပ်ကနေဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှမကြာသေးမီက Matilda ကိုထောကျပံ့ဖို့နှစ်ဖက် switched ခဲ့တဲ့စတီဖင်ရဲ့အစ်ကို, ကြိုဆို
မတ်လ 3, 1141 - Matilda ထုံးတမျးအ Winchester ကဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ Lady ( "domina anglorum" သို့မဟုတ် "Anglorum Domina") ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်
ဧပြီလ 8, 1141 - Matilda, Winchester က၏ဆရာတော်ကထောက်ခံ Winchester ကမှာခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကောင်စီကစတီဖင်၏အစ်ကို Blois ၏ဟင်နရီအင်္ဂလိပ်၏သမ္မတကတော် ( "domina anglorum" သို့မဟုတ် "Anglorum Domina" သို့မဟုတ် "Anglia Normanniaeque domina") ကိုကြွေးကြော်
1141 - လန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာ Matilda ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဒါသူမ၏တရားဝင်ရာဇဘိသိတ်ဖွစျနိုငျမတိုင်မီသူတို့သူမ၏ထွက်ပစ်သောလူဦးရေကဲ့ရဲ့
1141 - စတီဖင်ရဲ့အစ်ကိုဟင်နရီနောက်တဖန်နှစ်ဖက်ပြောင်းလဲစတီဖင်နှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
1141 - စတီဖင်ရဲ့မရှိခြင်း, သူ့ဇနီး (နှင့် Empress Matilda ၏မိခင်ဝမ်းကွဲ) ခုနှစ်, Boulogne ၏ Matilda, တပ်ဖွဲ့တွေထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့် Empress Matilda မြားကိုတိုကျခိုကျဖို့သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏
1141 - Matilda အသုဘ bier အပေါ်တစ်ဦးအလောင်းအဖြစ််၏, စတီဖင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကနေသိသိသာသာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
1141 - စတီဖင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေ Gloucestor အကျဉ်းသားများရောဘတ်ကို ယူ. , နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့က, Matilda ရောဘတ်များအတွက်စတီဖင်ဖလှယ်
1142 - Matilda, အောက်စ်ဖို့မှာစတီဖင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့များက seige အောက်မှာကြီးနှင့်နှင်းဖုံးရှုခင်းနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမှအဖြူကိုဝတ်ဆင်ညအချိန်တွင်လွတ်ရ၏။ သူမသည်ဗြိတိန်သမိုင်းတွင်အတွက်အကြိုက်ဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်လာသည့်တစ်ဦးပါအဖြစ်အပျက်အတွက်သာလေးအပေါင်းအဘော်နှင့်အတူဘေးလွတ်ရာသို့သူမ၏လမ်းကိုဖန်ဆင်း
1144 - Anjou ၏ဂျက်ဖရီစတီဖင်ကနေနော်မန်၏အပိုင်အနိုင်ရ
1147 - ရောဘတ်၏သေခြင်း Gloucester ၏ Earl နှင့် Matilda ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအင်္ဂလန်၏သူမ၏ဘုရင်မလုပ်သူတို့၏တက်ကြွမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဆုံးသတ်
1148 - Matilda Rouen အနီးအသကျရှငျ, နော်မန်မှအငြိမ်းစား
1140 - ဟင်နရီ Fitzempress, Matilda နှင့်ဂျက်ဖရီ၏အကြီးဆုံးသား, နော်မန်၏အမည်ရှိ Duke
1151 - Anjou ၏ဂျက်ဖရီသေဟင်နရီ Plantagenet အဖြစ်လူသိများလာသည်သူကိုဟင်နရီ, Anjou ၏အရေအတွက်အဖြစ်သူ၏ခေါင်းစဉ်အမွေဆက်ခံ
1152 - Anjou ၏ဟင်နရီအခြားသိသိသာသာဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်လက်ထပ် Aquitaine ၏ Eleanor လူးဝစ် VII, ပြင်သစ်ဘုရင်မှလအနည်းငယ်သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက်, အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
1152? - ယူတကျစျ, Boulogne ၏ Matilda အားဖြင့်စတီဖင်၏သားများ, စတီဖင်ရဲ့အမွေဆက်ခံသူ, သေဆုံး
1153 - Winchester က၏စာချုပ် (သို့မဟုတ်စာချုပ် Wallingford) စတီဖင်ရဲ့သားငယ်ဝီလျံကျော်လွှား, စတီဖင်မှ Matilda ရဲ့သားဟင်နရီအမွေဆက်ခံသူအမည်နှင့်စတီဖင်မိမိတစ်သက်တာ၏ကြာချိန်အဘို့ရှင်ဘုရင်ကဆက်လက်ရှိနေနှင့်သားတော်ဝီလျံမိမိအဘ၏မြေများကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့သင့်ကြောင်းသဘောတူ ပြင်သစ်မှာ
1154 - စတီဖင်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှု (အောက်တိုဘာလ 25) ၏မမျှော်လင့်ဘဲကွယ်လွန်သွားနှင့်ဟင်နရီ Fitzempress အင်္ဂလန်ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်, ဟင်နရီ II ကို, ပထမဦးဆုံး Plantagenet ညျရှငျဘုရငျ
စက်တင်ဘာလ 10, 1167 - Matilda သေ Fontevrault Abbey မှာ Rouen မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏
အဲလစ်ဇဘက် Cady Stanton တို့ Quotes
Lizzie Borden ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်း 100 အများစုမှာအရေးကြီးအမျိုးသမီးများနေ့
စာရာသည်က Parker Remond, အာဖရိကန်အမေရိကန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး
ဒါဟာ NFL အတွက်ကန့်သတ်အခမဲ့အေးဂျင့် Be ဖို့ဘာအဓိပ်ပာ
မည်သို့ Do ဧကရာဇ်ရွှေ့ပြောင်းဖို့တဲ့အခါမှာမသိကြသလော
တစ်ဦးရေကူးခြေအထဲက Wipe ဖို့လေ့ကျင့်ခန်း Kick
ပြောင်နောက်နောက် PuTTY များ၏သမိုင်း
အတွက် Virgil အားဖြင့် '' အဆိုပါ Aeneid '' ကနေ quotes
Ground Zero, 2002 များအတွက်အနိုင်ရရှိမှု Master Plan ကို
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း 8 ဘရုစ် Cockburn သီချင်းများ
ကျီးကန်း, ကျီးနှင့် Jays
ရှီအာနှင့်စွန္နီမွတ်စ်လင်အကြားတွင် Key ကိုကွာခြားချက်များ
တစ်ဦး '' Bowmaker '' ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ Play လုပ်နည်း
အိုင်ဖုန်း, အိုင်ပက်နဲ့ Android များအတွက် 8 အကောင်းဆုံးဘူမိဗေဒ Apps ကပ
တစ်ဦးရှကျလှေ Dock လုပ်နည်း
စုံလငျတဲ့ဘဲလေးကသမား Bun Make
"ချီတက်ဆန္ဒပြ" Conjugate လုပ်နည်း (Walk ရန်, ရာထူးအမည်ရန်, အလုပျ)
WIMPS: အ dark matter နက်နဲသောအရာမှအဆိုပါဖြေရှင်းချက်?
သေခြင်း, ငွေ, နှင့်လျှပ်စစ်သဘာပတိ၏သမိုင်း